SXSW 2014 Inopindirana Infographic Kuputira | Martech Zone
SXSW 2014 Inopindirana Infographic Kuputira
Chipiri, Kurume 18, 2014 China, June 18, 2015 Jenn Lisak Golding
Chimwe chezvinhu zvinotonhorera nezve mumwe wedu Meltwater social media monitoring software ndeyekuti iwe unogona kuongorora misoro uye zviitiko zvakanyatso kuti uwane mufananidzo uzere wemanzwiro uye mukurumbira. Gore rino, vakatanga kuongorora iyo buzz yakatenderedza SXSW musi waFebruary 26 uye akawana mamwe maitiro anonakidza:
NSA muridzi wemhepo, Edward Snowden, yaive hombe basa. 7% yeiyo buzz yemagariro yaive Snowden yakabatana.
Varume vakatumira zvimwe zvakawanda kune zvemagariro: 62% maringe ne 38% yevakadzi.
Justin Bieber akange ataurwa mazana mana muzana kupfuura Grumpy Cat! (Iti whaaaa?)
Kune ese akatonhodza matanho, tarisa infographic pazasi. Uye usakanganwa kutarisa kwedu anotsigira Meltwater's yemagariro midhiya yekutarisa chishandiso chemabhizinesi.
Tekinoroji iri Kuumba Sei Ramangwana reKushambadzira
Kugadzira Inbound Webhusaiti Yegore ra2014
Mar 18, 2014 pa 11: 55 AM
Kwete zvakawanda nezvemumhanzi mutsva kana tekinoroji nyowani. Handioni chero kutaurwa nezvechiitiko chinosuruvarisa (3 hupenyu hwakarasika) hweSXSW 2014. Kunyanya kutaura.
Mar 18, 2014 pa 3: 11 PM
Hei John - Mibvunzo yakanaka. Ini ndakaburitsa iyi infographic, saka ini ndichapindura: isu takaongorora chikamu chinofambidzana chemusangano zvakanyanya, chakatanga kubva munaKurume 7-11. Nekudaro, hazvitaure nezve tsaona inotyisa yakaitika munaKurume 12. Isu tinobvumirana kuti zvinonakidza kuti pakanga pasina zvakawanda zvekutaura nezve tekinoroji nyowani panguva ino. Uye, semumwe munhu aive paRed River mazuva maviri pamberi penjodzi yakaipa iyi, moyo wangu unonzwira tsitsi kune wese munhu akabatwa nazvo.